GNUnet 0.14 dia miaraka amina fampiharana fandefasan-kafatra ary bebe kokoa | Avy amin'ny Linux
GNUnet 0.14 dia miaraka amina fampiharana fandefasan-kafatra sy maro hafa
Ny kinova vaovao an'ny GNUnet 0.14 dia efa navotsotra ary amin'ity kinova vaovao ity singa singa vaovao no nampiana izay ao anatin'ny dingana fanandramana, ary koa ny GNS izay efa ampifandraisina amin'ny famaritana naroso ao amin'ny IETF sy zavatra maro hafa.
Ho an'ireo izay tsy mahalala ny GNUnet, tokony ho fantatr'izy ireo izany natao hananganana tambajotra P2P itsinjaram-pahefana azo antoka. Ireo tambajotra noforonina noho ny fanampian'ny GNUnet dia tsy misy teboka iray amin'ny tsy fahombiazana ary afaka miantoka ny tsiambaratelon'ny mpiserasera, ao anatin'izany ny fanilihana ireo fanararaotana mety hataon'ny maso sy ny mpitantana izay manana fidirana amin'ny teboka ao amin'ny tambajotra.
GNUnet manohana ny tamba-jotra P2P amin'ny TCP, UDP, HTTP / HTTPS, Bluetooth ary WLAN, ary afaka miasa amin'ny maody F2F (namana na namana) izy io. Tohanan'ny crossover NAT, ao anatin'izany ny UPnP sy ICMP. Ny latabatra hash voazara (DHT) dia azo ampiasaina hiatrehana ny sarintany data.
Ny rafitra dia miavaka amin'ny fanjifana harena ambany ary ny fampiasana mari-trano marobe ahafahana mitoka-monina eo anelanelan'ny singa. Fanomezana antonony firaketana sy fanangonana antontan'isa no omena.
Hampivelatra ny fampiharana farany, GNUnet dia manome API ho an'ny fiteny C ary rohy ho an'ny fiteny fandaharana hafa. Mba hanatsorana ny fampandrosoana dia soso-kevitra ny hampiasa tadivavarana sy tadivavarana fa tsy kofehy. Izy io dia misy tranomboky fitsapana ho an'ny fametrahana ho azy ireo tambajotra fanandramana izay mandrakotra tsiroaroa an'aliny.
Fampisehoana vaovao lehibe an'ny GNUnet 0.14
Ao amin'ny kinova vaovao dia voalaza fa manapaka ny fifanarahana rehetra izany, noho izany ny fananana ny kinova vaovao dia tsy maintsy raisina ity anton-javatra ity.
Fanavaozana lehibe izany. Manaparitaka ny fampifanarahana protokol amin'ny kinova 0.13.x. Mariho fa noho izany dia tompony Git izao Ilana miaraka amin'ny tamba-jotra GNUnet 0.13.x, ary ny fifandraisana eo amin'ny mpiara-mianatra taloha sy vaovao dia hiteraka olana. Ny mpiara-mianatra 0.13.x dia afaka mifandray amin'i Git master na 0.13.x mpiara-miasa aminy, saingy serivisy sasany, indrindra ny GNS, no tsy ho tohanana
Eo amin'ny lafiny fampiasana, mpampiasa dia tokony hanamarika fa mbola misy olana lehibe misokatra maro an'isa.indrindra momba ny fanamorana ny fampiasana, fa koa ny olana momba ny tsiambaratelo sasany, indrindra ho an'ireo mpampiasa finday.
Ary koa, ny tambajotra vao teraka dia kely ary noho izany dia tsy azo inoana ny hanome anarana tsy fantatra anarana na fampahalalana mahaliana be dia be. Vokatr'izany, kinova 0.14.0 tsy mety afa-tsy ho an'ireo mpampiasa voalohany izay tsy mahazaka fanaintainana .
Nisy singa fanandramana vaovao nampiana miaraka amin'ny fampiharana hafatra miaraka amina interface tsara mifototra amin'ny GTK.
Etsy ankilany GNS GNU (Rafitra anarana nomena anarana voafidy) ampifandraisina amin'ny famaritana naroso ao amin'ny IETF. Ho fanampin'ny lakile ECDSA, karazana fanalahidy hafa izao dia azo ampiasaina hamaritana faritra, fa ny fanohanan-kevitra mifandimby EdDSA dia mbola tsy nampiharina. Mba hanaingoana ireo firaketana ao amin'ireo faritra misy kaody ECDSA, ny algorithm AES dia ampiasaina amin'ny maody CTR.
Ny serivisy fanondroana dia manolotra ny fahaizana mampiasa ECDSA (default) sy EdDSA tsiroaroa.
Ny localisation dia tsy mandeha amin'ny laoniny fotoana hanatrarana ny fahafahan'ny fiovam-po.
Farany, momba ny olana fantatra:
Ny olana momba ny famolavolana manan-danja dia fantatra ao amin'ny subsystem TRANSPORT, ATS, ary CORE izay mila horesahina amin'ny ho avy mba hahatratrarana ny fampiasana, ny fahombiazana ary ny filaminana azo ekena.
Misy fetrany fampiharana antonony ao amin'ny CADET izay misy fiatraikany ratsy amin'ny zava-bita.
Ny olan'ny famolavolana antonony dia fantatra ao amin'ny FS izay misy fiatraikany amin'ny fampiasana sy ny fahombiazany.
Misy fetra fampiharana kely ao amin'ny SET izay mamorona tampoka fanafihana tsy ilaina amin'ny fisian.
Ny subsystem RPS dia mbola andrana ihany.
Ny fitsapana avo lenta sasany ao amin'ny efitrano fitsapana dia tsy mahomby noho ny olana TRANSPORTATION ambany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » GNUnet 0.14 dia miaraka amina fampiharana fandefasan-kafatra sy maro hafa
Virtualization: Avadiho ho tontolo sahaza azy ny GNU / Linux Distro anao